UCyril Ramaphosa – ubhekana nenselelo yekhulu leminyaka | Scrolla Izindaba
UCyril Ramaphosa – ubhekana nenselelo yekhulu leminyaka
Kufanele umzwele uCyril Ramaphosa.
Akagcinanga nje ngokuthola uhulumeni ongenamali ngemuva kokuphangwa ngabakwaGupta kanye nabangani babo kuhulumeni.
Imizamo yakhe yokuqeda abantu abakhohlakele nokubhekana nokukhula kancane nokungalingani kucindezelwa i-ANC elwa ngaphakathi kwayo kanye nemikhonto edonswa emuva kwakhe.
Kwathi eminyakeni emibili ekuphathweni kwakhe wabhekana nenkinga enkulu yezempilo nezomnotho ekhulwini leminyaka.
Ukube inkanyezi kaRamaphosa yawa ngaphambi kwe-Covid, unyaka wezi-2020 usikhumbuze izinto ezinhle – ungungoti, othatha uhulumeni ngendlela ebalulekile.
Ekuqaleni kwenkinga ye-Covid, wahlanganisa isizwe futhi iNingizimu Afrika yathola umzuzu omncane wobumbano.
Njengoba engamele uhulumeni obuthakathaka okhishwe wukulawulwa kombuso, ubhekane nalolu bhubhane ngendlela engcono.
Lokhu bekuhluke kakhulu kubaholi emhlabeni jikelele njengoDonald Trump waseMelika noBoris Johnson wase-UK.
Futhi manje amahlathi okuchasha aya ngokuphela kulabo abalawula umbuso kahulumeni, njengoba uRamaphosa elwela ukukhipha inkohlakalo egazini le-ANC.
Iningi labantu baseNingizimu Afrika lisamthanda – futhi uhlala ethandwa kakhulu kuneqembu lakhe.
Akuwona unyaka omubi lo kumengameli wesine wentando yeningi waseNingizimu Afrika.